UNWTO डिनर, जर्जिया स्टाइलमा Countries 34 देशहरूमा घूस दिने छ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » सरकारी समाचार » UNWTO डिनर, जर्जिया स्टाइलमा Countries 34 देशहरूमा घूस दिने छ
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • शिक्षा • सरकारी समाचार • लक्जरी समाचार • सभाहरूमा • समाचार • मान्छे • पुनर्निर्माण • स्पेन ताजा खबर • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
विश्व पर्यटन संगठनको एक गोप्य चालमा 34 XNUMX देशलाई घूस दिनका लागि तयार पारिएको डिनर हिजो यूएनडब्ल्यूटीओ इलेक्शनका कार्यक्रममा आधिकारिक रूपमा थपिएको थियो। स्पेनका सेलिब्रिटी शेफ डानी गार्सियाले सोमबार माद्रिदको फोर सिजन होटलमा घूस खाने तयारी गरेकी छन। जर्जियाका परराष्ट्र मन्त्रीले बहरिन बिरूद्ध आक्रमणमा उनलाई भुक्तान गरे।
हिजो मात्र म्याड्रिडमा के भयो भनेर सचेत पर्यटन नेताहरु लाई बुझ्न कठिन समय छ। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठनको सहयोगमा जर्जिया गणराज्यले बहराइन राज्यको बिरूद्ध खुला आक्रमण गर्ने योजना बनाएको छ सोमबार ११113 औं कार्यकारी परिषद्को बैठक।
युएनडब्ल्यूटीओको आधिकारिक लेटरहेडमा, जर्जिया गणराज्यका परराष्ट्र मन्त्री श्री। डेविड जल्कालिनी मंगलबारको महासचिवको चुनावमा मतदान गर्ने countries 34 देशका प्रतिनिधिहरूका लागि पाहुना हुनेछन्। वर्तमान UNWTO महासचिव जर्जियाका हुन् र UNWTO सचिवालयमाथि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्थे र यो गैरकानुनी चाललाई योजना र सुविधाका लागि प्रयोग गर्छन्।
बहरिनसँग आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार छ। उनी हिजो अचम्म मा परेकी र उनको प्रतिद्वन्द्वी, यूएनडब्ल्यूटीओ को वर्तमान महासचिव लाई बढावा दिन डिजाइन गरिएको यूएन डिनरमा भाग नलिने निर्णय गरे।
Invated अतिथिहरु डिनरमा UNWTO कार्यकारी काउन्सिलका सदस्य देशहरूका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरू हुन्।
खाना खानु भन्दा पहिले, महाराज, स्पेनका राजा एल पार्डो प्यालेसमा उही प्रतिनिधिहरूलाई अभिवादन गर्नेछ।
कुन देशहरूले घूस लिन्छन् वा राम्रोसँग खानेछन्?
जर्जियाले 34 XNUMX देशहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गरीरहेछ घूसखोरीमा डिनर:
बहरेन (उपस्थित छैन)
कोविड १ 19 र म्याड्रिडमा जाडो आँधीबेहरीका कारण केवल १ वा २ मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुने आशा गरिन्छ। बाँकी देशहरू प्रोक्सीमा भाग लिने छन् वा उनीहरूको म्याड्रिडमा आधारित दूतावासका कर्मचारीहरू प्रतिनिधित्व गर्ने छन्।
जनवरी २०१ 2017 मा, UNWTO स्थायी पर्यटन वर्ष मनाईयो।
२०१ registered मा महासचिवको चुनावको लागि प्रतिस्पर्धा गरेका सबै दर्ता गरिएका उम्मेद्वारहरू मैड्रिडमा थिए र फिटूरको उद्घाटन कार्यक्रममा भाग लिएका थिए।
सम्मानजनक पाहुनाको रूपमा जर्जियाका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुख्य भाषण देखाए। उनको ध्यान टिकाऊ पर्यटनमा कम प्रासंगिक थियो, तर सबै महासचिवका लागि जर्जियाका उम्मेद्वार जुराब पोलीकाशिविली प्रचार गर्ने बारेमा। FITUR दर्शकहरूमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू आश्चर्यचकित भए।
२०१ 2017 को जुनमा UNWTO महासचिवका लागि चुनाव हुनुभन्दा एक रात अघि, म्याड्रिडको जर्जिया दूतावासले प्रतिनिधिहरूका लागि टिकट किनेको फुटबल खेलमा भाग लिनको लागि जर्जियाका उम्मेदवार जुराब पोलीकाकाविलीसँग राम्रो समय बिताउनको लागि टिकट खरीद गर्यो। एक सर्वेक्षणमा, eTurboNews पाठकहरूले मतदान गरे जुन यो खेल प्रतिनिधिलाई घूस दिनको लागि डिजाइन गरिएको थियो।
एटीक्यू न्यूजले एक लेखमा सोधे: के रियल मैड्रिडले अर्को UNWTO पर्यटन SG छनौट गरे?
सेप्टेम्बरमा जुराबले कार्यकारी परिषद्को ११२ औं अधिवेशनलाई आफ्नै देश जर्जियामा आमन्त्रित गरे। जर्जियामा ११२ औं UNWTO कार्यकारी काउन्सिलको बैठक कत्तिको घोटाला भयो?
FITUR काउन्सिलले जुुरबको अभिव्यक्ति अनुसरण गरेको थियो जुन उम्मेदवारहरूले साइन अप गरेर एसजीको लागि अर्को हप्ताको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि समय विन्डोबाट धेरै महिना कटौती गर्न चाहन्छन्।
FITUR पनि २०२२ का लागि चुनाव मे २०२१ को सट्टा अर्को हप्ता म Tuesday्गलबार सारिएको कारण हो।
जर्जिया कार्यकारी काउन्सिल बैठक पछि केवल केही दिन बाँकी छ, Candid उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न आवेदन दिए, र केवल एक व्यक्ति स्वीकार गरियो। जुरबको सचिवालयले paper उम्मेद्वारहरुलाई अयोग्य घोषित गर्‍यो कारण आवश्यक कागजातमा अंश हराएको थियो।
यस बीचमा, FITUR रद्द गरियो। नोभेम्बरमा UNWTO कार्यकारी काउन्सिलका मन्त्रीहरूले सही काम गर्ने मौका पाए, तर उनीहरूले गरेनन्।
सही कुरा हुनेछ एक उचित समय सीमा प्रदान गर्न गरिएको छ उम्मेदवारहरूको लागि दर्ता गर्न। सही कुरा भनेको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई प्रचार गर्न अनुमति दिनको लागि मतदानको मूल दिन फिर्ता सार्नुपर्थ्यो।
न केवल COVID-१ lock लकडाउन नियमहरू कडा भयो, तर एउटा डरलाग्दो हिउँको तूफानले कार्यकारी काउन्सिलका देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने tourism of पर्यटन मन्त्रीहरूलाई अर्को हप्ता म्याड्रिड यात्रा गर्न कठिन बनायो। देशहरू अब चुनावमा भाग लिन म्याड्रिड वा प्रोक्सीहरूमा उनीहरूको दूतावासहरूमा निर्भर छन्, वा कुनै पनि हालतमा उपस्थित हुँदैनन्। धेरै देशहरुको म्याड्रिडमा दूतावास छैन।
The "UNWTO चुनाव अभियानको शालीनता " विश्व पर्यटन नेटवर्क द्वारा आरम्भ गरिएको युएनडब्ल्यूटीओका दुई पूर्व महासचिवहरू र १०० भन्दा बढी देशका सयौं पर्यटन नेताहरूले हस्ताक्षर गरे।
पर्यटनका केही मतदान मन्त्रीहरूले COVID-१ for का लागि सकारात्मक परीक्षण गरेका थिए भन्ने कुराले जुराब पोलीकाशिविलीलाई अर्को हप्ताको बैठक रद्द गर्न राजी गरेन। विद्युतीय मतलाई पनि अनुमति दिइएन।
दूतावासहरू पर्यटन मन्त्रीहरूले नभई विदेश मन्त्रीहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन्। यदि कोही अर्को हप्ता कार्यकारी परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुनेछन् भने यो धेरै पर्यटन मन्त्रीहरू हुनेछैनन्। दूतावासका कर्मचारीहरूसँग सम्झौता गर्ने प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन सक्छन्। दूतावासहरू सँधै विदेश मन्त्रालयहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन्।
जुराबको हेरफेरको अन्तिम खेल अब खुलासा गर्दैछ। अचम्मको रूपमा देखा परेको हुनसक्छ तर होशियारीपूर्वक योजना गरिएको जर्जियाका परराष्ट्रमन्त्री चुनावको अघिल्लो रातको आधिकारिक स्वागत भोजको आयोजना गर्नका लागि हवाईजहाजमा आइरहेका छन् - जर्जिया शैली।
राम्रो खाना, राम्रो वाइन जर्जियाको लागि मतदान गर्न प्रतिनिधिहरू पाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो बहरिनबाट मात्र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार छोड्दै छ महामहिम शेखा माई अल खलिफा साइडलाइनमा।
यूएनको नैतिकता संहितालाई उल्लio्घन गर्दै
यूएनडब्ल्यूटीओका पूर्व महासचिव डा। तलेब रिफाईका अनुसार, म्याड्रिडमा के भइरहेको छ त्यसले कुनै पनि ज्ञात आचार संहिताको उल्ल .्घन गर्दछ। उसले भन्यो eTurboNews: "तपाईं कार्यकारी काउन्सिलको एजेन्डामा आधिकारिक वस्तु परिचय दिन सक्नुहुन्न जुन एक मात्र उम्मेद्वारलाई फाइदा र प्रमोटनको लागि डिजाइन गरिएको हो।"
पूर्व उम्मेद्वार डा। वाल्टर मेजेम्बीले भने: "अवस्थित नैतिकताको स्पष्ट उल्लंघन।"